फ्रान्स .... यो देशको नाम सुन्नु, सबैले आफ्नै बारेमा सोचेका छन्। कसैले मास्केटसेस्टर अलेक्जेन्डर डुमालाई सम्झनेछ, र कसैले तातो पकाएको सामानको सुगन्धमा गन्ध गर्नेछन्। तर सबैले सहमत हुनेछन् कि फ्रांसीसी सधैँ रह्यो, र यो दिनको लागि, फैशन र शैलीका विधायकहरू। त्यसैले कपडामा फ्रांसीसी शैली के हो? एक शब्दमा, तपाईं भन्न सक्नुहुन्न। यो केहि अविश्वसनीय रूप देखि सुरुचिपूर्ण, फैशनेबल छ, तर एकै समयमा, महिलाहरु समान जस्तै छैन। क्लासिक फ्रांसीसी शैली सिल्हाइट, शांत रंग र एक जोरदार एक्सेन्टको सादगी हो, प्रत्येक आकर्षक को व्यक्तित्वमा जोड दिन्छ। अनि निस्सन्देह, उच्च गुणस्तर, राम्रो कट र अधिग्रहणको प्राकृतिक कपडाको लुगा। सायद, फ्रांसीसी महिलाहरू, कुनै पनि अरूलाई थाहा छैन जस्तै क्लासिक कहिल्यै फैशनबाट बाहिर जान्छ। त्यसकारण, तिनीहरूका अलमारीहरूमा तपाईंले सख्त स्कर्ट र पतलून, लुगा-मासुहरू भेट्टाउन सक्नुहुनेछ। तर तपाईं कसरी त्यस्तो अचम्मलाग्दो काममा अनावश्यक हुन सक्नुहुन्छ? जवाफ सजिलो छ: सामानहरू रोचक र ज्वरो छन्, तपाईं संग टोन बाहिर बाहिर गर्न सक्नुहुन्न। मुख्य कुरा यसलाई अधिकृत छैन, किनकि हाम्रो लक्ष्य छवि क्रान्ति र ठाडो क्रिसमस रूख जस्तो बरु छ।
वैसे, क्लासिकल फ्रांसीसी शैली संग अधिक या कम लगाईएको छ। अनि अब यो समयको बारेमा थाहा छ कि कस्तो परिस्थिति संगठनको साथ हो, जुन धेरै तख्ता, मोती, स्फटिक र सबै प्रकारका गोलो बिना असंगत छ। यो विवाहको पोशाकको बारेमा हो। साँच्चिकै, तपाईंले "विवाहको पोशाक" शब्द सुन्नु भएको बेला, म केही सजिलो लड्न सक्नेछु, वायुसेवा, व्हाइड क्रीम संग एक केक को सम्झना। यो बाहिर जान्छ कि यहाँ सम्म कि फ्रान्सेली महिलाहरूले मुख्य सिद्धान्त परिवर्तन गर्दैनन्: "सरल र सुन्दर।" फ्रांसीसी शैलीमा विवाहित पोशाक, निस्सन्देह, उपरोक्त विशेषताहरु को बिना होइन। तर, सम्भवतः फ्रांसीसीको लागि सुरुवात एक विवाहको पोशाक बनाउन अनुपात र शैली को भावना दिन्छ। पेरिस विवाहको पोशाक कहिल्यै सजावटी विवरणहरू पूरा हुँदैन। यदि पोथी धनी रूपमा सजाय गरिन्छ भने, यो सधैँ एक सरल स्कर्टसँग मेल खान्छ। रंग प्राथमिकताहरू, यहाँ फ्रांसीसी महिलाहरू केही रूढिवादी छन्। मूलतया, यो एक क्लासिक सेतो या विभिन्न क्रीम क्रीम (रंग "शैम्पेन", "इमरीरी") हो।
धेरै भन्नु हुनेछ यो फ्रांसीसी शैली र ठाडो साथ दिएको बारेमा बहस गर्न सजिलो छ, यदि त्यो उत्सव निकास, राम्रो, वा कामको लागि भन्दा खराब को लागी डिजाईन गरिएको छ। तर कसरी फ्रान्सेली शैलीको विश्वासी रहन, कपडाको लागि, भन्नुहोस्, साथीहरूसँग आराम र पार्कमा हिंड्ने? फ्रान्सका सुन्दर बासिन्दाहरू पहिले यो प्रश्न यसको लायक छैन। के तपाईंले देश लुगाको बारेमा सुन्नुभएको छ? र सोच्नुहोस् कि यी पुरानो थोरै चीजहरू छन् जसले एक चिठी लुकाउँछ। देश, यो सहज र एकै समयमा, सरल लुगाहरू, प्राकृतिक रंगहरू। तर, कसले भन्यो कि यो यसमा आकर्षक हेर्न असंभव छ? देश शैलीमा लुगा लगाइरहेका, फ्रान्सेलीमान निश्चित रूपमा पूरै पूरै हुनेछ तिनका सुरुचिपूर्ण स्यान्डलहरू उच्च हाइइल्स, केही रोचक मोतीहरू र, सधैंभरि, उनीहरूको छविमा धेरै प्रशंसा पाउनेछन्। ठीक छ, निस्सन्देह, प्रिय जीन्स सबैले पनि, आफूलाई आफैं फ्रांसीसी देशको एउटी शैलीमा पनि लागू गर्न पाउनेछ । तिनीहरू बुना भयो टी-शर्ट वा ढीलो ब्लाउजहरूसँग जोड्न सकिन्छ। छाला पट्टाबाट बनाइएको सुन्दर पट्टा वा कंगन चयन गरिएको छवि पूरै हुनेछ।
र, शायद, फ्रांसीसी महिलाहरु को शैली को विस्तार मा विस्तार को मुख्य रहस्य। राम्रो खुवाउने हात, राम्रो मैनीक्योर र पेडीक्योर, स्वच्छ केशिका - यो सबै पेरिसियनहरूले सुन्दरता र स्त्रीनिष्ठताको मानक बनाउँछ।
फ्रांसीसी महिला, निस्सन्देह, राम्रो स्वाद छ र शैलीको एक सहज भावना छ, तर सबैभन्दा सुन्दर महिला अझै पूर्व सोभियत यूनियनको विस्तारमा बस्छन्। एक सानो कल्पना, विस्तार मा थोडा ध्यान र तपाईंको अपरिहार्यता मा विश्वास को एक सावधानी, र फ्रेंच आकर्षण र ठाँउ, साथ नै प्रशंसकहरु को प्रशंसा, तपाईं प्रदान गरिएको छ।
पतनमा जेन्स-प्रेमीलाई के गर्ने?
गर्मीको फोटो शूटको लागि पोषण
पतनमा टोपी लगाउने के साथ?
नयाँ वर्षको कर्पोरेट-सुझाव सुझाव स्टाइलिस्टहरूमा राख्नु पर्छ
प्रकृतिमा ग्रीष्मकालीन फोटो सत्र
खुल्ला नाकसँग स्यान्डल कसरी गर्ने?
गुलाबका साथ फोटो खिच्न
जंगलमा फोटो शूटको लागि पोषण
जेन्स प्रेमीहरूलाई के गर्ने?
सेफिम सरोस्कोसीलाई केले मद्दत गर्छ?
ब्ल्याकबेरी - किस्महरू
मन्डारिनहरू कसरी बढ्छ?
सेतो मिर्च भन्दा उपयोगी छ?
पिल्जहरु कि उल्टो कारण
गुरेरिया क्षेत्रको जेस्सुइट मिशन
पूर्ण महिलाहरु को लागि स्टाइलिश ड्रेस
लिआ सेडौले विज्ञापनमा लुइस विइटनलाई घोडाको साथ तारा चिन्ह लगाए
लिथियम एएए बैटरियों
फैशनेबल कपाल रंग 2013
पामेला एन्डरसन एक पेट बढ्यो
बेडरूम बैंगनी टोनमा
मेरो कपाल मेरो छातीमा किन बढ्छ?
12 पशु संसारबाट धेरै अविश्वसनीय भाषाहरू